शुभ विजया | Bishow Nath Kharel
Saturday, 20 October 2012 20:48
नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूलो चाड बडादसैंको मुख्य समय सुरु भएको छ । हरेक समुदाय र तहका नेपालीबीच आफ्नै संस्कृतिका रूपमा विकसित बडादसैं हिन्दू मात्र नभएर सबै धर्मावलम्बीका लागि सांस्कृतिक सद्भावको पर्वका रूपमा स्थापित भएको छ । यस अर्थमा नेपालको सांस्कृतिक विविधताबीच बडादसैंको आm्नै विशेष स्थान छ ।
यही सांस्कृतिक सद्भावकै कारण अन्य धर्म र सम्प्रदायका चाडपर्वलेसमेत हिन्दू धर्मावलम्बीबाट भित्रैदेखि मान्यता पाउन थालेका छन् । यो नेपाली विशिष्टता नै हो । यस्तै सद्भाव मुलुककको राजनीतिक, आर्थिक सामाजिकलगायत हरेक क्षेत्रमा कायम गर्नु जरुरी छ । खुसी र उल्लासको पर्व भए पनि विगत लामो समयदेखि नेपाली जनताले वास्तविक रूपमा त्यो अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भए पनि मुलुक नयाँ संविधान पाउन सकेको छैन । फलतः लम्बिँदो जटिल राजनीतिक संक्रमणका कारण चौतर्फी संकट छाएको छ । बजारमा अभाव, महँगी र कालोबजारी व्याप्त छ । अनुगमन गर्ने सरकारी निकायहरू निष्क्रिय छन् या उनीहरूको कारबाही प्रभावहीन छ ।
१० वर्षको सशस्त्र द्वन्द्व दैनिक १८ घन्टासम्मको लोडसेडिङ, चन्दा आतंक र असुरक्षाले उद्योग– व्यापार जगत् उठ्नै नसक्ने गरी प्रताडित भएको छ । उद्योगधन्दाको गिर्दो अवस्थाका कारण मुलुकमा रोजगारी अभाव भएको छ । स्वदेशमै रोजगारी नपाएपछि लाखौं सिर्जनशील युवाहरू कामको खोजीमा बिदेसिन बाध्य भएका छन् । झन्डै पछिल्लो सिंगै दशक अस्तव्यस्ततामै बितेको छ ।
तर पनि मुलुकको शासनसत्ताको बागडोर सम्हालेको प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको सत्ता लोलुपताका कारण यो संकटको निकास अनिश्चित बन्दै छ । यो दुःखदायी तथ्यबीच यस वर्षको दसैं मनाइँदै छ । बडादसैंको सबैभन्दा महŒवपूर्ण दिन विजया दशमीलाई मान्यजनको भेटघाट टीका, जमरा लगाएर आशिष लिने प्रचलन छ । यही दिन हो, जसले विगतका वैमनश्यतालाई समेत नामेट पारेर हार्दिकता कायम गराउन भूमिका निर्वाह खेल्छ, आमनागरिकमा । सर्वसाधारणमा आपसी द्वेष मेटाउने प्रयास भए पनि नेतृत्व तहमा चाहिँ समन्वय र सहकार्यको खडेरी परेको हो कि भन्ने अनुमान भइरहेको छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच समन्वयका अभाव भएकाले मुलुक लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी भएको जगजाहेरै छ । मुलुकमा अग्रगामी निकासका लागि प्रमुख दलहरूबीच आपसी सौहार्दको विकल्प छैन । केही प्रमुख दलका नेताहरूले ‘दसैंपछि सहमति’ भन्ने शब्दलाई पटक–पटक दोहो¥याएकाले पनि आशा गर्ने ठाउँ बढेको छ । तर, ढुक्क हुन भने सकिन्न । किनकि दलका नेता स्वयंले पटक–पटक ‘बोलेको कुरा पूरा नगरेकाले’ एकखालको अविश्वास कायमै छ । आपूmहरूमाथि लागेको ‘अविश्वास’ मेटनका लागि पनि सहमति गर्नै पर्छ । मुलुकलाई निकास दिनै पर्छ । अतः यो दसैं वास्तवमै फलदायी हुनेछ भनेमा हामी आशावादी होऔं ।
मुलुकमा चर्केको १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व त दलहरूकै प्रयासमा अन्त्य भयो भने नयाँ संविधान बनाउनु कुन ठूलो कुरा भयो र ? त्यसमाथि कतिपय विवादित मुद्दामा सहमति समेत भइसकेको छ । प्रतिपक्ष दलहरूले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सत्ताबाट बहिर्गमनलाई सहमति कायम हुने अस्त्र बनाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री भट्टराईले पनि प्रतिपक्ष दलहरूको भावनाको सम्मान गरे भने वास्तवमै आमनागरिकले ‘बडादसैं’ को वास्तविक खुसीको अनुभूत गर्न पाउनेछन् । अनि एक अर्कालाई शुभकामनामा पनि हार्दिकताको आभाष देखिनेछ । बडादसैंले सुन्दर, सान्त र समुन्नत नयाँ नेपाल निर्माणमा सबैलाई प्रेरणा मिलोस्, हाम्रो पनि यही शुभकामना ।
Source : http://www.rajdhani.com.np/index.php?option=com_content&view=article&id=3197%3A-&catid=29%3A2012-07-26-08-30-57&Itemid=23&lang=en